Mahad Salaad Oo 5 Qodob Kasoo Saaray Hadalkii Uu Farmaajo Xalay Jeediyay – Great Banaadir
Mahad Salaad Oo 5 Qodob Kasoo Saaray Hadalkii Uu Farmaajo Xalay Jeediyay
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo katirsan Golaha Shacabka ayaa ka hadlay Hadalkii Xalay uu jeediyay Madaxweynaha Muddo Xilleedkiisa Dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ee uu uga hadlay Xaaladda cakiran ee Dalka iyo Doorashada.
Xildhibaan Mahad Salaad oo Qoraal soo dhigay Bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in uusan Farmaajo Khudbadiisa kusoo Hadal qaadin Xaaladda ka taagan Muqdisho iyo Go’aankii Muddo Kordhinta Sharci Darrada loogu sameeyay.
Xildhibaanka ayaa sheegay in Farmaajo uusan ka tacsiyeen Dadkii ku dhintay Dagaaladii ka dhacay Magaalada Muqdisho iyo Dadkii Shalay ka barakacay Guryahooda, isagoona Farmaajo ku eedeeyay inuu iska indhotiray Xaaladda ka dhex taagan Ciidamada.
Sidoo kale Mahad Salaad ayaa tilmaamay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan sheegin sida Xal loogu heli karo Ismariwaaga Siyaasadeed ee jira, isla markaana uusan ku baaqin Wadatashi iyo Dib-u-heshiisiin Siyaasadeed,
Qoraalka uu soo saaray Mahad Salaad ayaa u qornaa sidaan:
Ismoogaysiis iyo Ila-meerayso ayay ahayd Khudbadii Farmaajo Xalay jeediyay. Kumana soo hadalqaadin Dhibaatada ka taagan Magaalada Muqdisho iyo Qalalaasaha Siyaasadeed iyo midka Amni uu Dalka geliyay. Tusaale:
1) Sooma hadalqaadin Ku-darsigii Xaaraanta ahaa iyo Xukun Boobkii uu ku kacay 12-kii Bishan Abriil 2021.
2) Kama garaabin, umana tacsiyeen Shacabkii Dhiigooda uu daadiyay, Guryahoodana ka barakiciyay iyadoo Bil Ramadaan lagu jiro.
3) Wuxuu iska indhotiray Fidnada uu ka dhex abuuray Ciidamada Qalabka, isagoo kala qaybiyay kadibna Qoryo isugu dhiibay. Mana jiro Maanta Askari, Askari kale aaminaya iyo Sarkaal laga Amar qaadanayo, Qof walibana wuxuu miciin bidday Qorigiisa iyo Qabiilkiisa.
4) Sidoo kale ma sheegin sida Xal loogu heli karo Ismariwaaga Siyaasadeed ee Maanta taagan, Kumana Baaqin Wadatashi iyo Dib-u-heshiisiin Siyaasadeed oo Dalka lagu samatabixinayo.
5) Isku soo wada duuboo Ujeedka Farmaajo, wuxuu ahaa Ii-dheh Siyaasadeed uu Waqti ku iibsanayo si uu u diyaar garoobo isla markaasna isaga yareeyo Caadiska Ciidan ee dulsaaran iyo Goodiska Beesha Caalamka ku hayso.
Ugu dambeyntii waxaan ku baaqayaa inaan Heeganka laga bixin inta Ninkaan Jid iyo Jiho Diidka ah Dalka iyo Dadka laga badbaadinayo. Lagana hubiynayo in dalku doorasho aadayo.